SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU. kutaa 1ffaa | Caayaa Saphaloo
← “TEENYAATU NU BOONSA!”
SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU Kutaa 2ffaa →
SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU. kutaa 1ffaa
Posted on June 22, 2013	by Saphaloo Kadiir
Guutuu Usuu ,
Abbaa isaanii Obbo Guutuu Usuu Cammarrii fi haadha isaanii Aaddee
Dhuulloo Alii Hasan
irraa bara 1924 Ona
madda- Wolaabuu lafa Oda jedhamutti
Abbaan isaanii obbo Guutuun ilma dhiiraa (10) fi durba (9) wolumaa galatti ujoollee (19) qaban turan. Isaan keessaa Jeneraal Waaqo ammoo dubartoota ( 7 ) irraa ujoollee (49) ka horan yoo ta’an , kaniin keesaa (15) lubbuun hin jiran. yeroo ammaa
abba dubartii (16) tii fi dhiira (18) wolumaa galatti abbaa ujoollee
armi’aayaa, xiiqii fi
jibbansa diinaa qabaniif qofa osoo hinta’in Diddaa Gabrummaa tiif
Bara 1938 ti osoo
mana osoo hin bayin
gabayanii horii abbaa
qawwee bitatan. Sammuun isaanii roorroo gabrumaa fudhataa waan hinta’iniif ijoollee
Bara 1943 obbo
Bara 1952 akka nama
miskiina tokkoo ta’anii uffata Foolisaa nama dhaloota Gosa Raayituu Alii jiloo ka maqaan kirsitaana Shaalaqaa Isayaasi jedhanii mogaafatan
kadhachuun erga ini
keneefii booda, isuma
seenanii , kitilaayyota
turan. Iccitii dhan
gartuulee diinaa irrati
fudhataa turan, bara
1958 Foolisii lama (2)
ajjeesan. Baruma kana
keessa Foolisoota erga ajjeesaniin booda, gootichi, akkuma tasaa
wol argan. yoo kana ,
“E-eesa badee?, Atoo
Waaqoo !!! “ jedhee
gaafata. yoo tana malli qaruutummaa dafee dhufeef. ”Looniin godaanee gammoojjii ture, Damma adii ati
jaalttu ka nagaafate
kaan siif arge, horii
ittiin bitu dhabee fidi”
baay’ee gamaddee ,”xuruu xuruu” Qaaqoo koo!”
jedhee Qarshii 200 itti
kenna. garaa keessa itti kolfaa kiisa kaayatanii birraa deemanii yeroo
san rasaasa zinnaara
guutatee biraa deeme” jetdha.
Ammas baatii tokkoon booda Nageelematti
futi wolitti jedhanii .
hin gaafatin “maali si
damma kee bitee lafa
jiraa , horii kiraa waan kafalu ittiin feesisuun dhabee “ jedheenii Qarshii 20 amalee irraa fudhate tooftaa kana fakaatu
diina hifachiisaa turan.
Bara 1962 dhiibaan,
mootummaa Habashaa ummata isaanii irratti
kkf ijoollee gana (10)
gadii imaa Helgool
guutuu , Alii Jiloo,
Butaa Aagaatiif alii
Buttaa Aagaa kkf
keessaa haga tokko
yoo ta’an , tarkaanfii
Mootummaa Aabashaa kana hifachuun ummatin bulchitoota naannooo ka Habashaati iyyate.
yeroo kana , dubbii
kana nugusicha gayee.
Finfinnee irraa Koloneel Taaaddasaa taganiif namin jedhamuuf ajajaa woraanaa kutaa Sidaamoo yeroo sanii
Xilahun gadi dhufanii
Booranaa jiru mooraa woraantitti wolit qabuun Rakkoon
keesan maali jedhanii
gaafatan. yoo tana
Ummani woliti qaban
hundi rakkoon teena
isini:- Biyya teena irrati dhuftanii nu ajjeessaa jirtan, dubartii fi daa’imman teena irra deemitanii fixaa jirtan, Qabeena keena saamitanii kaan
namoon isin uf jalati
saamtan maaliin nuun
adda jiran? Nuuf isaan
adda nu baaftan? kana hundaa isintuu nutti fidee lafa teena irraa nuu ka’aa” jedhaniin.
Aangawichi mootummaa kunis yoo dhumaatiif saamicha jalaa bayuu barbaadan lafa tana gadi dhiisaa gama lafa teesaniit galaa. Lafti tun teesanii
mitii isin kasafitee jirtee lafti teesan Dhaddacha Warraabiif achii gadii deemaa itti galaa jedheen .yoo ka’uu didan du’aafi saamichi isin irraa hin hafu amoo huminaanuu hinkaatanii beekadhaa” jedheen.
Magaalaa Dooloo tan
Sumaalee irraa KM 70
gadi fagaati. Ummani
nuti lafti teena tanaa
gadi dhiifnee Biyya
ambaatti wonti galuufi hinjiruu jedhanii ittii iyyinaan “Maal akka Shimbira ganamaa wol jalaa Ciwu Ciwu”jetu
jedhee R/T waraana
banachoon humna itti
kana waan beekuufi
hayee, akka jetanuu
haa ta’uu ni kaanaa
guyyaa baalamaa nuu
This entry was posted in Gootaa goototaa, Seenaa and tagged Seenaa, seenaa goototaa. Bookmark the permalink.
facebook.com/10000254476741… 4 minutes ago
Eebbifamtoonni Univarsitii Dirree dhawaa yeroo jalqabaatiif muummee afaan oromootiin eebbifamuu deeman barana qophi… twitter.com/i/web/status/1… 23 minutes ago